Maxaa kala socotaa 10-ka xirfadood ee hab dhaqan jileedka ku soo badatay Mogadishu. Qore: Prof. Yaxye Caamir | Voice Of Somalia
2- Si aad Diaspora ugu muuqato waa in aad 6 saac qoraxda oo kulul aad jaako qaadato, madaxa xiirato, waa in aad garbka surato boorso u eg kuwa laabtoobka lagu qaato,af somaliga aad ku hadleeyso waa in aad jajabiso,dhowr xaraf oo English u egna aad ku darto,waxaa tahay diaspora.
3- Si aad nabdoon ugu ekaato,waa in aad qaadato nooca sharaxan ee cimaamadaha Boosaaso laga keeno,macawis iyo baakoor qaali ah, fadhi ku diriradana aad ka sheegto,war been ah oo aan dadku ogeeyn,iyo in arrin aanan lagaala tashan eeyna dalka ka soconeeyn.
10- Si aad ganacsade ugu ekaato,waa in aad suubsato warqada dakada lagu galo,hadalkaagu waa in uu ubataa, Dubai iyo Kenya somalida joogto, ka sheekee in aad tahay ganacsade tolkiisu ka dambeeyaan hadeeyna qaaraan ka rabin . Haka jawaabin haddii lagu weeydiiyo LC, Import Export, iyo Bank account illeyn mataqaanide.
Qore: Prof. Yaxye Caamir